डा. प्रमिस भर्सेस मिस्टर पर्फेक्ट - Sawal Nepal
काठमाडौ जुनी भण्डारी २०७८ जेष्ठ २, ०८:३१
‘केटाको घरबाट सबै आउने रे? मैले फाइनल डिसिजन सुनाएकै छैन, म उसँग आधा घण्टा भेट्न तयार भएँ। यसको मतलब बिहेकै लागि म राजी भए भन्ने त होइन नि,’ म अलि चर्को स्वरमा कराएँ। दिदी, आमा र आन्टीले मलाइ एकैसाथ खाउँला जस्तो गरी हेर्न थाले। मैले फेरि आफ्नो निर्णय सुनाएँ – ठिक छ उनीहरूलाई आउन दिनुस्, यो सबै पकवान सिध्याउने मान्छे पनि त चाहियो। तर, मेरो निर्णय सुन्नुस्, म उसँग बिहे गर्दिन, नितु म्याडमले ल्याको कुरा थियो नि टायल व्यापारी, हो म आज उसैसँग भेटेर आएँ, मलाई ऊ मन पर्यो। म उसैसँग बिहे गर्न चाहन्छु।
मेरो कुरा सुनेपछि सबै जनाले मलाइ यसरी हेर्नुभयो कि मानौं मैले कुनै मान्छेको हत्या गरेर आएकी छु या म कुनै अपराधी हो। त्यसपछि पालैपालो मलाई सम्झाउने काम सुरु भयो। उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो – तेरो दिमाग त ठिक ठाउँमा छ? प्रमिशको दाँजोमा कोही पनि केटा आउन सक्दैन। हेर, अरुले छोरी कसलाई दिनुभो भनेर सोध्दा पनि पिएचडी होल्डरलाई भन्दा हाम्रो कत्रो इज्जत रहन्छ। उसको खान्दान, उसको इज्जत हेर त, उसको बुवालाई नचिन्ने कोही छैन। भने जस्तो जागिर, इज्जत,घर सबै कुरा सोच्नुपर्छ बिहेजस्तो निर्णय लिँदा।